Magaalada Athens oo hal Masjid ku Oolin.
Athenes(SONNA)- Iyadoo Bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jiro, ayaa la sheegayaa in Jaaliyadda Muslimiinta ku nool mgaalada Athens ee dalka Girigga haysanin Masjid rasmi ah,oo ay waajibadka farliga ee Salaadda Ebe ku gutaan,balse ay ku duktaan goobo gaar ah.
Sida ay qortay Wakaalada Wararka Islaamka Iina, Magaalada Athens ayaa noqotay mgaalada keliya ee Caasimadaha Yurub, xitaa hal Majid laheyn, tasina waa mida dhalisay in dhaleeceyn Caalami ah loo jeediyo Dowlada Girigga.
Sanadkan 2016, ayaa Dowlada Girigga, ansixisay Qaanuun samaxaya dhismo Masjid oo lagu maalgelinayo hanti caam ah. Laakiin Degaan xadka dhinaca waqooyiga dalkaasi kala wadaaga Turkiga oo ay u badan yihiin Muslimiin ayaa la sheegay inay ku yaalan 300 Masajid.
Ka hor intii dalka Girigga, xurnimada ka qaadanin xukunkii Cusmaaniyiinta sanadkii 1832, waxaa magaalada Athens ee caasimada dalkasi Grigga ku yaalay boqolaal Masaajid, laakin waxaa loo bedelay Xarumo dowladeed iyo Matxaf iyodoo qaar ka mid ah Maasaajidyadaasi ay burbureen.
Dalka Grigga ayaa waxaa xilligan ay buux dhaafiyeen Qaxooti fara badan oo Muslimiin ah oo uga imanaya wadamada Suuriya, Ciraaq iyo Afganistaan, waxaana ay u baahan yihiin meel ay cibaadada Alle ku gutaan.